Maitiro ekudzora chero mutauri neAirPlay 2 uchishandisa Siri | IPhone nhau
AirPlay 2 iri kuvhura mukaha muindasitiri yemutauri uye mazhinji uye akawanda mabhenji anosarudza kuisa Apple standard mumidziyo yavo Kutenda kwaari tinogona kunakidzwa nemultiroom (kana multiroom) uye ridzai mumhanzi mumwechete mumakamuri ese eimba, kana zvakapesana, tamba zvakasiyana zvemukati mune yega yega. Asi inotipawo mukana wekudzora maspika kuburikidza naSiri.
Kana iwe uchifunga kuti iyo HomePod haisi iyo yauri kutsvaga, nemutengo kana nezvimiro, zvakakosha kuti iwe uzive izvo chero mutauri ane AirPlay 2 unogona kuidzora kuburikidza neSiri kubva kune yako iPhone kana iPad, saka unogona kukumbira mubatsiri waApple kuti aridze mimhanzi yako yaunofarira kana podcast pane mutauri waunoda nezwi rako chete. Isu tinotsanangura nzira yekumisikidza uye kuitisa.
1 Wedzera Kumba
2 Shevedza Siri
Chero mutauri weAirPlay anofanira kunge akabatana neWiFi netiweki, uye izvi zvinoitwa kuburikidza nekushandisa kwechiratidzo chaicho. Izvi zvichave zvichitokupa iwe kupinda kune multiroom asi kwete kudzora kuburikidza naSiri. Kuti utore mukana kune zvese izvo AirPlay 2 inotipa, iwe unofanirwa kuwedzera mutauri kuImba application, sekunge yaive yekushandisa yeK HomeKit. Iwe unofanirwa kutevedzera nhanho dzakaratidzwa muvhidhiyo, kana mumufananidzo unotevera.
Zita raunopa mutauri, pamwe nekamuri mauriisa, rakakosha nekuti ndiyo ichave nzira iyo Siri achakwanisa kuiziva nayo. Unogona kugara uchidana zita racho (Sonos Kicheni mumuenzaniso wangu) kana nekamuri (mutauri wekicheni). Kana paine akati wandei mutauri, kuudza Siri "(mumba) maspika" anonzwika pane ese asina kuadana rimwe nerimwe.
Kana izvozvo zvapera, iwe unozokwanisa kukumbira Siri kubva kune yako iPhone kana iPad uye kuratidza zvaunoda kunzwa pane mutauri. Rangarira kushandisa zita kana kamuri kuti uzive uye kuti zvese zvinoshanda nemazvo. Mimwe mienzaniso ndeiyi:
Ndiri kuda kuteerera kumumhanzi wangu wandinofarira pane speaker yekicheni
Ndiri kuda kunzwa playlist "x" pane maspika eimba yekutandarira
Ini ndoda kuteerera kune yazvino iPhone News podcast pane yekurara mutauri
Zvinokosha zvinodiwa ndezvekuti iwo maapplication aunoshandisa ekutamba anoenderana naSiri, chimwe chinhu chisingaitike neSpotify, semuenzaniso. Kana iwe uri Apple Music kana mushandisi wePodcast, unogona kuzviita pasina dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Maitiro ekudzora chero mutauri neAirPlay 2 uchishandisa Siri
Wall Street Journal inoita kunge yakarova chibvumirano kuti chiwanikwe paApple News
Kutumirwa kwechizvarwa chechipiri AirPods kunonoka kusvika muna Kubvumbi muUnited States